Vol. 12 FEBROARY, 1911. Tsia
TIA ny voninahitra, ny fahalalahan-tanana, ny fahamarinana, ny fahatsoram-po, ny fahamarinana ary ny hatsaram-panahy hafa amin'ny fampiasana matetika sy tsy an-draritr'ireo tsy manambany, ny fisakaizana no resahina ary ny fanomezan-tokana ny fisakaizana dia avarina ary ekena na aiza na aiza; fa, toy ny hatsaram-panahy hafa, ary, na dia tsapan'ny olon-drehetra aza izany dia fatorana sy fanjakana tsy fahita firy izy io.
Na aiza na aiza no itambaran'olona maro, dia misy fifamatorana eo anelanelan'ny sasany izay tsy miraharaha na tsy mankahala ny hafa. Misy ny antsoin'ny ankizy mpianatra hoe ny sakaizany. Mifanakalo saro-pantarina izy ireo ary mizara amin'ireo fotoam-pianarana sy fanatanjahantena ary trika ary fitotoana ivelan'ny fahatanoran'ny tanora. Ao ny mpivarotra tovovavy, tovovavy tovovavy, ny finaman'ny tovovavy. Samy mifampiresaka ny tsiambaratelony; mifanampy izy ireo amin'ny fanatanterahana ny teti-dratsiny ary misy manantena ny hanao fitaka kely izay mety hanitarana ny drafitry ny hafa, na hiaro azy rehefa tsy tadiavina ny fikatsahana azy; Ny fifandraisan'izy ireo dia mamela ny iray hamoaka ny tenany amin'ny hafa amin'ireo zavatra kely manan-danja izay misy fahalianana iraisana.
Ny lehilahy mpandraharaha dia miresaka ny fisakaizan'izy ireo, izay matetika atao amin'ny raharaha ara-barotra amin'ny varotra. Rehefa angatahina ny fahazoana dia omena averina. Samy hanome fanampiana sy fanohanana ara-bola sy hanome ny anarany amin'ny vola hafa sy ny trosa hafa ny anarany, fa manantena ny fiverenan'ny hafa. Indraindray ny loza dia raisina am-pirahalahiana amin'ny alàlan'ny fanampiana ny iray hafa izay iharan'ny loza ho azy manokana; ary ny fisakaizana eo amin'ny sehatry ny fandraharahana dia nivelatra tamin'io ambaratonga io izay napetraky ny sasany tamin'ny ampahany betsaka tamin'ny harenany manokana, ka ny iray hafa, natahotra ny fatiantoka na nesorina ny vintana azony, dia mety hahazo izany indray. Saingy tsy fanakafam-pianakaviana hentitra loatra izany. Ny fisakaizana eo amin'ny sehatry ny raharaham-barotra dia azo aseho amin'ny tombatombanan'ny lehilahy ao amin'ny Wall Street izay, rehefa vonona ny hikarakara sy mandehandeha orinasa mpitrandraka harena, dia maniry ny hanome azy endrika sy tanjaka izany, hoy izy: "Hanoro hevitra an'Atoa Moneybox aho. ary Andriamatoa Dollarbill sy Andriamatoa Churchwarden, momba ilay orinasa. Naman'izy ireo aho. Nangataka azy ireo aho handray amina tahiry be dia be ary hanao azy ireo tale. Inona no tsara ho an'ny namanao raha tsy azonao ampiasaina izy ireo? ”Ny filan'ny mpanao politika dia mila fanampiana amin'ny fety, mifehy sy manatsara ny teti-dratsiny, ny fametrahana ny volavolan-dalàna na inona na inona na inona fotsiny, ho tombontsoan'ny mponina , manome tombontsoa manokana, na toetra tsy mendrika sy maharikoriko. "Azoko atao ve ny miankina amin'ny fisakaizanao?" Hoy ny mpitondra andraikitra iray amin'ny mpanohana azy raha ny fepetra tsy azo toherina dia tokony hoterena amin'ny fety sy apetrany amin'ny vahoaka. "Manana izany ianao, ary hahita anao aho," no valiny manome toky azy amin'ny fisakaizan'ny hafa.
Misy ny fisakaizana eo amin'ireo tsangantsangana genteel sy ny lehilahy eran'izao tontolo izao nofaritan'ny iray tamin'izy ireo rehefa nanazava tamin'ny iray hafa izy hoe: "Eny, ny fametrahana ny voninahitr'i Charlie sy ny fitazonana ny fihavanantsika, dia nandainga toy ny lehilahy malefaka aho." mpanao heloka bevava, tsy vitan'ny hoe misy olona hanampy ny hafa amin'ny heloka bevava, ary mizara ny helony toy ny ao amin'ny fandrobana, fa handeha amin'ny zavatra rehetra izy mba hiarovana azy amin'ny lalàna na hahazoana antoka ny fanafahana azy raha gadraina. Ny fisakaizan'ny mpiara-miasa amin'ny miaramila sy ny miaramila ary ny polisy dia mitaky ny fihetsiky ny olona iray, na dia tsy mendrika sy mahamenatra aza, dia hotohanana sy hiarovan'ny olon-kafa iray hanampiana azy hihazona ny toerany na hotendrena ho ambony kokoa. Amin'ny alalan'ireny fifankatiavana rehetra ireny dia misy toe-tsaina iray kilasy izay ivoahan'ny vatana sy ny vatany tsirairay.
Misy ny fisakaizan'ny mpiray tanindrazana, mpihaona tendrombohitra, mpihaza, mpitsangatsangana ary mpitaingin-tsofina, izay noforonina rehefa natsipy miaraka tao anatin'izany tontolo izany izy ireo, niatrika zava-tsarotra mitovy ihany, nahafantatra sy nitolona tamin'ny alàlan'ny loza mitovy ary mitazona ireo fiafarana mitovy aminy. Ny fisakaizan'ireto dia mazàna amin'ny fahatsapana na ny filàna iaraha-miasa amin'ny loza ara-batana, amin'ny alàlan'ny fitarihana sy fanampiana omena any amin'ny faritra mampidi-doza, ary amin'ny alàlan'ny fanampiana amin'ny bibidia na fahavalo hafa any anaty ala na tany efitra.
Ny fisakaizana dia tsy maintsy manavaka amin'ny fifandraisana hafa toy ny olom-pantatra, firahalahiana, ny fifandraisana akaiky, ny tiana, ny sakaiza, ny namana ary ny fitiavana. Ireo izay mahalala, dia mety tsy mifampitana na tsy mifanalavitra; Ny fisakaizana dia mitaky ny hahaliana ny hafa. Ny fiaraha-miasa dia mila firaisana mifanentana amin'ny fiarahamonina sy ny fialam-boly tia mandray vahiny; fa ireo manana fiaraha-monina dia mety hiteny ratsy na hanao izay tsy ekeny. Ny fisakaizana dia tsy hamela fitaka toy izany. Mety ho efa niasa nandritra ny taona maro ny fifaneraserana, na tany amin'ny faribolana hafa nitaky ny fisian'ny olona iray, nefa mety hankahala sy hanamavo ny olona akaiky azy izy. Ny fisakaizana dia tsy mamela izany fahatsapana izany. Avy amin'ny olom-pantatra akaiky na avy amin'ny firaisana ara-tsosialy ny fahafantarana, izay mety tsy ho diso sy tsy tiana; tsy misy fahatsapana marary na tsy tiana mety hanana fisakaizana. Ny fisakaizana dia fihetsika na ny fanjakana iray izay mahaliana ny hafa, izay mety tsy hankasitrahana ary tsy takatry ny hafa; ny fisakaizana dia tsy iray ihany; mifamadika izy io ary azon'ny roa tonta. Ny fiaraha-miombon'antoka dia fiaraha-miasa manokana sy fiaraha-miasa, izay mety hifarana rehefa misaraka ny mpiara-miasa; Tsy miankina amin'ny fifandraisana manokana na fikambanana ny fisakaizana; Ny fisakaizana dia mety misy eo amin'ireo izay mbola tsy nifankahita ary maharitra, na izany aza, ny halaviran'ny elanelana sy ny fotoana mety miditra. Ny fifikirana dia toe-tsaina iray izay mitazona ny tenany amin'ny olona, ​​olom-pehezena na misy; ny toe-javatra izay ahatongavany am-pahavitrihana, miasa amina tanjona iray, amin'ny fikatsahana ny fahazoana ambim-pananana na filamatra, na amin'ny fiankohofana momba an'Andriamanitra. Ny fisakaizana dia eo anelanelan'ny saina sy ny saina, fa tsy eo anelanelan'ny saina sy ny tsara, na ny fitsipika tsy mahomby; na ny fisakaizana ny fanompoana izay omen'ny saina an'Andriamanitra. Ny fisakaizana dia manome marika mitovy na ifanarahana eo amin'ny saina sy ny saina. Ny fitiavana dia mazàna dia heverina ho maniry mafy sy faniriana, fahatsapana fihetseham-po sy fitiavana amin'ny zavatra, olona, ​​toerana na fananany; ary ny fitiavana dia noheverina manokana ary ampiasaina hanondroana ny fahatsapana na ny fihetseham-po, na ny fifankatiavana feno eo amin'ny samy fianakaviana, eo amin'ny olona tia, na eo anelanelan'ny mpivady. Ny fisakaizana dia mety misy eo amin'ny mpianakavy sy ny lehilahy sy ny vehivavy; fa ny fifandraisan'ny mpivady, na ny mpivady dia tsy sakaiza. Ny finamanana dia tsy mila manome fahafaham-po ny fihetseham-po na amin'ny fifandraisana ara-batana. Ny fifandraisan'ny fisakaiza dia ara-tsaina, amin'ny saina, ary tsy an'ny saina. Ny fitiavana ny olona mankany amin'Andriamanitra, na avy amin'ny Andriamanitry ny olona, ​​dia ny fihetsiky ny olona ambany noho ny olona ambony kokoa, na ny fisian'ny olona mahery indrindra amin'ny olona iray voafetra sy tsy manam-pahalalana azy. Manakaiky ny fitoviana ny fisakaizana. Ny fisakaizana dia azo lazaina fa fitiavana, raha tsy manam-pitiavana ilay fitiavana; ny fahatsapana na fahalalana ny fifandraisana, tsy voafehin'ireo fahatsapana ara-tsaina; fanjakana iray izay nanjavona ny fahatsapan'ny ambony sy ambany.
Misy fomba hafa nampiasana ny teny, ohatra ny fisakaizana ny olona sy ny alika, ny soavaly ary ny biby hafa. Ny fatorana eo amin'ny biby sy ny olona, ​​izay diso amin'ny fisakaizana, dia ny fitoviana ny natiora ao amin'ny faniriana, na ny valin'ny fanirian'ilay biby amin'ny fihevitry ny sain'olombelona momba azy. Ny biby dia mamaly ny fihetsiky ny olona ary mankasitraka ary mamaly ny heviny. Saingy afaka mamaly amin'ny alàlan'ny serivisy fotsiny izy, ary ny fahavononana hanao izay zavatra maha-faniriana azy dia mahavita. Mety hanompo ny olona ny biby ary maty ho faty eo am-panompoana azy. Saingy tsy mbola misy ny fihavanana eo amin'ny biby sy ny olona, ​​satria ny fisakaizana no mitaky fifankahazoana sy fandraisana andraikitra ny saina sy ny eritreritra, ary tsy misy ny fandraisana andraikitra toy izany na ny fisainana mifampiresaka avy amin'ny biby ka hatramin'ny olona. Io biby io dia tena manome taratra ny eritreritry ny olona aminy. Tsy takatry ny saina ilay izy raha tsy hoe misy ifandraisany amin'ny faniriany manokana; tsy mety avy amin'ny eritreritra, na mampita amin'ny olona ny toetra ara-tsaina. Ny fifamaliana eo amin'ny saina sy ny saina amin'ny alàlan'ny eritreritra, tena ilaina eo amin'ny fatoram-pirahalahiana, dia tsy azo atao ny tsy eo amin'ny olombelona, ​​ny saina ary ny biby.
Ny fitsapana ny fisakaizana marina na diso dia ny tsy fananana fitiavan-tena na ny fitiavan-tena ao anatiny. Ny fiarahana marina dia tsy vondrom-piarahamonina ihany. Mety misy ny fisakaizana eo amin'ireo olona manana vondron'olona liana, fa ny tena fisakaizana dia tsy mieritreritra ny hahazoana zavatra omena, na mamaly amin'ny fomba rehetra natao. Ny tena finamanana dia ny fisainana hafa ary ny fiarahan-javatra na ny hafa ho an'ny mahasoa azy, tsy mamela ny eritreritry ny tena manokana ho hanelingelina izay eritreretina sy natao ho an'ny hafa. Ny tena finamanana dia ao anatin'ny antony manosika tsy misy fitiavan-tena izay mahatonga ny fisainana sy ny fihetsika ho an'ny tsara hafa, tsy hahaliana ny tenany.
Ny fanaovana hetsika na mody manao ho an'ny tombontsoan'ny hafa, rehefa ny tombotsoan'ny tena sy ny tombotsoan'ny tena dia tsy fisakaizana ny fifanarahana. Hita matetika izany fa misy vondron'olona liana ary miresaka momba ny fisakaizan'izy ireo. Maharitra ny fisakaizana raha tsy mieritreritra ny tsy hahazo ilay anjarany izy, na mandra-pahatongan'ny iray tsy manaiky azy. Avy eo dia nitsahatra ilay fifandraisana finamanana ary ilay nantsoina hoe fisakaizana dia tena mitady tombontsoa manokana. Rehefa manana fifandraisana antsoina hoe fisakaizana amina namana hafa ny olona iray noho ny fisakaizana toy izany dia mety hahazo tombony izy, na mahazo sitraka amin'ny faniriany, na mahazo ny faniriany, dia tsy misy fisakaizana. Ny porofo fa ny fihavanana atao hoe namana dia tsy fisakaiza, hita rehefa misy maniry ny hanao ratsy. Ny fisakaizana dia mety hisy ny iray na ny iray na samy hahazo tombony amin'ny fisakaizana; fa raha ny fahalianana amin'ny tena no antony manambatra azy ireo dia toa mihamanjaka ny fisakaizan'izy ireo. Amin'ny fisakaizana marina dia samy hanana izay mahaliana ny hafa ny tsirairay avy, satria ny fiheverany ny hafa dia lehibe sy lehibe kokoa noho ny faniriana sy ny faniriana, ary ny zavatra nataony sy ny fifandraisany dia mampiseho ny fironan'ny eritreriny.
Ny tena fisakaizana dia tsy hanaiky ny ain'ny namana iray tandindomin-doza hamonjy ny fiainany manokana. Izay manantena na maniry ny namany hanao vivery ny ainy, mandainga, hahavery ny fanomezam-boninahitra azy, mba ho voavonjy amin'ny trangan-javatra rehetra mitondra loza izy fa tsy sakaiza ary tsy misy ny fihavanana. Ny fandavan-tena lehibe dia mety ary aseho amin'ny fisakaizana raha ilaina ny fifikirana, toy ny fikarakarana lava sy maharitra ny fahalemena ara-batana na ara-tsaina ny hafa ary amin'ny fiaretana miasa aminy hanamaivana ny fijaliany sy hanampiana azy amin'ny fanamafisana ny sainy. Saingy ny tena namana dia tsy mitaky, mandrara, manao ny tsy mety ara-batana na ara-tsaina na ara-tsaina, ary ny fandavan-tena dia azo ampiharina afa-tsy ny fifikirana amin'ny fisakaizana no mitaky ny tsy mety atao na iza na iza. Ny tena fisakaizana dia somary fenon'ny fitsipi-pitondran-tena sy ny fahitsiana ary ny fahaizan-tsaina ka mamela ny fanoloran-tena na ny fironana hankany amin'izany diplaoma izany eo amin'ny fanompoana ataon'ny namana raha manimba ny hafa.
Mety ho vonona hamoy ny tenany ny olona iray ary mety hanao sorona ny ainy mihitsy aza noho ny fisakaizana, raha toa ka natao ho tanjona tsara ny sorona toy izany, raha tsy manao sorona ny tombotsoan'izay mifandray aminy izy, ary raha ny tenany Ny tombontsoan'ny fiainana ihany no sorona, ary tsy miala amin'ny adidy izy. Nasehony ny fisakaizana azo antoka sy lehibe indrindra izay tsy mandratra olona ary tsy manao ratsy, na dia eo aza ny antony mahatonga ny fisakaiza.
Ny fisakaizana dia hahatonga ny olona hisaina ao an-tsaina na hanao zavatra amin'ny sakaizany, hanamaivana azy amin'ny fahoriana, hampionona azy amin'ny fahoriana, hanamaivana ny enta-mavesany ary hanampy azy rehefa mila, hanamafy orina azy amin'ny fakam-panahy, hitazona ny fanantenana amin'ny famoizam-po, hanampy azy hanala ny fisalasalany, hampahery azy rehefa ao anatin'ny fotoan-tsarotra, lazao aminy ny fomba hanafoanana ny tahotra ao aminy, ny fomba handresena ny olany, hazavao ny fomba hianarana avy amin'ny fahadisoam-pananana sy hampiova ny fahavoazana ho azo atao, hametahana azy mandritra ireo tafio-drivotra. fiainana, hanentana azy amin'ny fanatrarana vaovao sy filamatra avo kokoa, ary, ankoatra izany, tsy hanafoanana na hamerana ny fihetsika maimaim-poana amin'ny eritreritra na amin'ny teny.
Toerana, tontolo iainana, toe-javatra, toe-javatra, faniriana, toetran-tena sy ny toerany, dia toa ny antony na antony mahatonga ny fisakaiza. Izy ireo ihany no hita. Ireo ihany no manome ny toerany; tsy ireny no antony mahatonga ny fisakaiza maharitra sy maharitra. Ny fisakaizana izay niforona sy maharitra ankehitriny dia vokatry ny fivoarana lava. Tsy kisendrasendra fotsiny no mitranga, na dia mety ho atomboka izao aza ny fisakaizana ary hiaina mandrakizay. Manomboka amin'ny fankasitrahana ny fisakaizana. Ny fankasitrahana dia tsy ny fisaorana fotsiny izay tsapan'ny mpahazo tombontsoa amin'ny mpahazo azy. Tsy ny fisaorana omena ny fiantrana mangatsiaka ho an'ny fiantrana, na ny fahatsapana fankasitrahana diso izay naseho na nasehon'ny olona ambany noho izay nomen'ny lehibeny azy. Ny fankasitrahana dia iray amin'ireo olona faran'izay tsara indrindra ary toetra mitovy amin'ny andriamanitra. Ny fankasitrahana dia fifohazan'ny saina amina zavatra tsara lazaina na atao, ary ny tsy maneho fitiavan-tena sy ny fivoahan'ny fo mankamin'ny olona izay nanao azy. Mampitombo ny fankasitrahana daholo ireo castes na toerana rehetra. Ny mpanompo iray dia mety mahay mankasitraka ny tompon'ny vatany noho ny hatsaram-panahy aseho, satria ny fankasitrahana iray feno fankasitrahana ny zanaka iray tamin'ny nanaitra azy ho mazava kokoa ny ampahany amin'ny olan'ny fiainana ary Andriamanitra dia mankasitraka an'ilay lehilahy izay maneho ny maha-Andriamanitra amin'ny fiainana. Ny fankasitrahana dia mpiara-belona aminy. Manomboka ny fisakaizana rehefa mandeha ny fankasitrahana ny hafa noho ny hatsaram-panahy sasany nasehon'ny teny na ny atao. Ny hatsaram-panahy sasany dia haseho ho valin-kafatra, fa tsy amin'ny alàlan'ny fandoavam-bola, fa noho ny fisisihan'ny ao anatiny; satria ny fihetsika dia manaraka ny mavesatry ny fo sy ny eritreritra ary ny iray hafa dia mankasitraka ny maha-fototry ny fankasitrahana ny zavatra nataony; Ary noho izany, ny tsirairay dia mahatsapa ny fahatsoram-po sy ny hatsaram-pon'ny hafa ho an'ny tenany, mitombo ny fahatakarana ny saina sy ny saina.
Hisy ny fahasahiranana ary hotsapaina tokoa ny fisakaizana, fa ny fihavanana dia hihazona raha tsy matanjaka loatra ny fahalianan'ny tena. Raha tokony hitranga izay hisakana na hiseho hanakorontana ny fisakaizana, toy ny mankany amin'ny toerana lavitra, na ny tsy fifanarahana nipoitra, na tokony hatsahatra ny fifampiresahana, na izany aza, ny fisakaizana, na dia toa tapaka aza, dia tsy mifarana. Na tsy tokony hahita ny iray hafa alohan'ny hahafatesany, ny fiaraha-miasa efa nanomboka, dia mbola tsy mifarana. Rehefa miverina ao an-tsaina indray na ny ho avy ny toe-tsaina, dia hihaona indray izy ireo ary havaozina ny fisakaizan'izy ireo.
Rehefa mifanambatra izy ireo, ny fanehoana eritreritra amin'ny alàlan'ny teny na fihetsika dia hamerina ao an-tsaina ary hahatsapa sy hoheverina ho toy ny havany izy ireo, ary amin'izany fiainana izany dia mety hamboarina ao anatin'ny rojom-pisakaizana. Havaozina indray izany ireo finamanana ireo ary ho zarain'ny fisarahana, tsy fifanarahana na fahafatesana; fa isaky ny manavao ny fisakaizana ny iray amin'ireo namana dia hanaiky ny iray ary haverina averina indray ny fisakaizana. Tsy hahafantatra ny fisakaizan'izy ireo amin'ny vatany taloha amin'ny fiainany hafa izy ireo, fa ny fahatsapana havana tsy ho mafy orina amin'izany. Ny fisakaizana mahery vaika toa mitongilana na tsy fahita firy ary izay maharitra amin'ny fisafidianana ny fiainana dia tsy manomboka amin'ny fisianà tranga tsy ampoizina tampoka. Tsy loza no natao ny fivoriana. Io no rohy hita hita tao anatin'ny zava-nitranga hatrizay izay nitatra tamin'ny fiainany hafa, ary ny fivoriana fanavaozana sy fankatoavana avy amin'ny fahatsapana ankohonana dia ny fisintonana ny fisakaizan'ny taloha. Ny sasany na ny fihetsika na ny iray na ny roa dia hahatonga ny fahatsapana ho namana ary hitohy aorian'izany.
Manomboka ny fandringanana ny fisakaizana rehefa misy olona saro-piaro amin'ireo fihetsika izay nandoa ilay iray, na ny hevitry ny namany amin'ny hafa. Raha hialona ny sakaizany ny fananany, ny zava-bitany, ny talenta na ny fahaizany, raha maniry ny hametraka ny sakaizany amin'ny alokaloka na ny hatsarany, ny fahatsapana fialonana sy ny fialonana dia hiteraka na hampiasa ny ahiahy sy fisalasalana mety, ary ny fahalianan'ny tena. dia hitarika azy ireo amin'ny asan'ny fanapotehana ny fisakaizana. Miaraka amin'ny fanohizan-dry zareo hatrany no hantsoina ny fanoheran'ny fisakaizana. Hiseho ny tsy fankasitrahana ary hitombo ny tsy fahampiana. Natao mialoha io matetika io, izay mahery ny fahalianan'ny tena manokana, amin'ny fanararaotana ny fisakaizana.
Manomboka ny fanararaotana ny fisakaizana raha ny fikasan'ny olona iray dia ny hampiasana ny iray nefa tsy hihevitra azy tsara. Hita amin'ny raharaham-barotra izany, izay tian'ny olona kokoa hanadino ny namany hanompo azy fa tsy handroso teboka mba hanompoana ny sakaizany. Amin'ny politika no hita hoe misy olona manandrana mampiasa ny namany amin'ny tombontsoany manokana nefa tsy vonona ny hanompo azy ireo. Eo amin'ny faribolana ara-tsosialy dia hita ny fisian'ny fisakaizana ny fisakaizana raha iray amin'ireo miantso ny namany avy, maniry sy manandrana mampiasa namana ho tombotsoany manokana. Avy amin'ny fangatahana mangatsiaka ny hafa dia hanao zavatra manelingelina noho ny fisakaizana, ary rehefa manohitra ny fanirian'ny hafa ny fanaovan-javatra, ny fanararaotana ny fisakaizana dia mety hangatahana ny fangatahana hafa hanao heloka bevava. Rehefa hitan'ny iray hafa fa ny fikasana ho namana fotsiny dia faniriana hahazo ny tolotra ho azy, dia mihamalemy ny fisakaizana ary mety maty izy, na mety miova ho mifanohitra amin'ny fisakaizana. Ny fisakaizana dia tsy tokony halaina.
Ny maha-zava-dehibe ny fanohizana ny fisakaizana dia ny tsy maintsy anekena ny tsirairay fa ny iray hafa dia manana fahalalahana misafidy amin'ny heviny sy ny ataony. Rehefa misy fisakaizana izany dia miaritra izany. Rehefa ampidirina sy hitohy ny fahalianana manokana, dia mety hiova ny fifankahalana, ny antipasy, ny fisorohana ary ny fankahalana.
Ny maha-finamanana dia fahalalahan'ny saina ary miorina sy miorina amin'ny fiandohan'ny ara-panahy sy ny firaisana farany an'ny olombelona rehetra.
Ny fisakaizana dia ny fifandraisan'ny saina sy ny saina, izay mitombo ary miorina ho vokatry ny antony manosika ny olona hieritreritra sy manao izay mahasoa sy mahasoa ny hafa.
Manomboka ny finamanana rehefa mahatonga ny sain-tsaina na ny eritreritra hafa ny fiheverana ny hafa iray hamantatra ny maha-mpianadahy azy ireo. Mihalehibe ny fisakaizana raha mitarika ny eritreritra ary ny asa dia tanterahina tsy mitady tombontsoa ho an'ny tena ary ho an'ny soa maharitra an'ny hafa. Ny fisakaizana dia niforona tsara sy napetraka ary tsy mety ho tapaka rehefa azo ekena fa ara-panahy amin'ny alàlan'ny tanjony sy ny tanjony.
Ny finamanana no iray amin'ny lehibe indrindra sy tsara indrindra amin'ny fifandraisana rehetra. Mamoha izy io ary mamoaka ary mamolavola toetra tsara sy ambony indrindra amin'ny saina, amin'ny alàlan'ny asan'ny zanak'olombelona. Ny fisakaizana dia afaka ary misy eo amin'ireo manana tombotsoa manokana sy mitovy amin'ny faniriany; fa na ny zavatra manintona sy ny fanirian'ny faniriana dia mety ho fototry ny tena fisakaizana.
Ny fisakaizana dia fifandraisana tokoa amin'ny saina, ary raha tsy misy io fifamatorana ara-tsaina io dia tsy misy ny fisakaiza marina. Ny fisakaizana dia iray amin'ireo fifandraisana maharitra sy tsara indrindra. Misy ifandraisany amin'ny fahaizan'ny saina rehetra; izany no mahatonga ny tsara indrindra ho an'ny lehilahy iray hanao ho an'ny namany, ary, amin'ny farany, dia mahatonga ny tsara indrindra amin'ny iray ho an'ny olona rehetra. Ny fisakaizana dia iray amin'ireo antony lehibe indrindra, ary mandrisika ny antony hafa rehetra, amin'ny fananganana toetra; mizaha ireo toerana malemy ary maneho ny fomba hanamafisana azy ireo; maneho ny tsy fatiantoka sy ny fomba hanomezana azy ireo izy ary mitarika amin'ny asa amin'ny ezaka tsy misy fitiavan-tena.
Nifoha ny fisakaizana dia niantso fihetseham-po izay tsy dia nisy fangoraham-po na dia kely aza, ary nametraka ny namana iray hifandray kokoa amin'ny fijalian'ny mpiara-belona aminy.
Ny fisakaizana dia manala ny fahitsiana amin'ny fanerena ny fitaka sy ny fonony sandoka ary ny fiheverana hianjera, ary mamela ny tena maha izy azy, ary maneho ny tenany amin'ny fahaizany. Ny fifankatiavana dia natsangan'ny fisakaizana, tamin'ny fitsanganana ireo fitsapana ary nanaporofo ny fahatokisany amin'ny fitsapana rehetra amin'ny fisakaizana. Mampianatra ny fahamarinana ny fisakaizana eo amin'ny eritreritra sy ny teny ary ny fihetsika, amin'ny alàlan'ny fisaintsainana ny zavatra tsara na tsara indrindra ho an'ny namana, amin'ny alalàn'ny namana iray milaza fa tsy misy quibble izay inoany ho marina sy ho an'ny tombontsoan'ny namany. Ny fisakaizana dia manamafy ny fahatokiana amin'ny olona amin'ny fahalalany sy fitandremany ny tsiambaratelo. Ny tahotra dia mitombo amin'ny fitomboan'ny fisakaizana, amin'ny tsy fisalasalana sy ny tsy fahatokisana, ary amin'ny fahalalana sy ny fifanakalozana fifanakalozana tsara. Manjary matanjaka ary mihatsara ny kalitao rehefa mandroso ny fisakaizana, amin'ny fampiharana eo amin'ny tombontsoan'ny hafa. Ny fisakaizana dia mitaky valifaty amin'ny olona, ​​amin'ny fampanginana ny hatezerana ary manala ny eritreritra ratsy, ny lolom-po na ny lolompo ary ny fieritreretan'ny hafa. Antsoina ny fifankahalana amin'ny alàlan'ny fisakaizana, amin'ny tsy fahafahanao mandratra ny sakaizany, amin'ny fisakaizana izay manaitra ny namana, ary amin'ny tsy fanirian'ny namana hanao zavatra mety hanimba ny hafa. Amin'ny alàlan'ny fahalalahan'ny fisakaizana no manome aingam-panahy, amin'ny faniriana hizara sy hanome izay tsara indrindra ananan'ny iray amin'ny namany. Ny fitiavan-tena dia mianatra amin'ny alàlan'ny fisakaizana, amin'ny alàlan'ny fanekena sy ny fanekena amim-pifaliana ny tombontsoan'ny sakaizany. Ny fisakaizana no mahatonga ny fambolena ny fahalemem-panahy, amin'ny alalan'ny fampiharana ny tena mifehy tena. Ny fisakaizana dia manafoana sy manatsara herim-po, amin'ny mahatonga ny olona iray hiatrika loza amin'ny fahasahiana, hanao zavatra be herim-po, ary hiaro ny zon'ny hafa. Mampirisika ny faharetana ny fisakaizana, amin'ny alalàn'ny iray amin'ny hadisoana na ny herin'ny sakaizany, hanohizany amin'ny fanehoana azy ireo aminy rehefa tokony omena, ary haharitra ny fotoana ilaina amin'ny fandresena sy fanovana ho toetra tsara. Fanampiana ho an'ny sakaiza amin'ny fitomboan'ny fahamendrehana, ny fanajana ny hafa, ary ny mahitsy sy ny fahitsiana ary ny fenitry ny fiainana izay takian'ny fisakaizana. Amin'ny alàlan'ny fisakaizana no ahatongavana amin'ny herin'ny fanampiana, amin'ny fihainoana ny olan'ny olona iray, fandraisana ny fiahiany ary amin'ny alàlan'ny fampisehoana ny fomba handresena ireo olany. Ny fisakaizana dia mpanentana amin'ny fahadiovana, amin'ny faniriana ambony idealy, amin'ny fanadiovana ny eritreritry ny olona iray ary ny fanoloran-tena amin'ny fitsipika marina. Fanampiana ho an'ny sakaiza amin'ny fampandrosoana ny fanavakavahana, amin'ny alalàn'ny iray mitady, mitsikera ary hamakafaka ny antony manosika azy, hiombona, handinika sy hitsara ny heviny, ary hamaritana ny asany sy ny andraikiny amin'ny namany. Ny fisakaizana dia fanampiana amin'ny hatsaram-panahy, amin'ny fangatahana ny fitondran-tena avo indrindra, amin'ny fahamendrehana fatratra sy ny fiainana mifanaraka amin'ny fotony. Ny fisakaizana dia iray amin'ireo mpanabe ny saina, satria manala ny fahitana izany ary mitaky ny saina hahita ny fifandraisany akaiky amin'ny hafa, handrefesana sy hahatakarany izany fifandraisana izany; manome fahalianana amin'ny drafitra sy fanampiana hafa amin'ny fampivoarana azy ireo izy ireo; izany dia mahatonga ny saina ho lasa novaina, hampitovina ary hahay handanjalanja amin'ny alàlan'ny fampanginana ny fitsaharany, manamarina ny mahomby azy ary handamina ny fomba fiteniny. Ny fisakaizana dia mitaky ny fifehezana ny fikorontanana, ny fandresena ny fanoherana ary ny fandefasana ny fisafotofotoana amin'ny alàlan'ny fahamarinana amin'ny fisainana sy ny fahamarinana. Ny finamanana amin'ny alàlan'ny fananana tanjona dia manampy ny saina hanavaka ny maha-izy azy, tonga amin'ny fahalalana manokana, ary hahita ny fifandraisany amin'ny hafa rehetra.